C / naasir wuxuu ka bartay luuqada Ingiriiska iskuul gaar loo leeyahay, guddiga doorashada ee lagu murmayna waxay cadeeyeen inuu haysto shahaado jaamacadeed oo dhanka saxaafadda ah, laakiin baaritaanka ay sameysay warbaahinta ma xaqiijin karo tan.
Khibraddiisa shaqo : Cabdinaasir wuxuu ka soo shaqeeyay warbaahinta gudaha 2005 – 2011 sida GBC iyo radio Shabelle.
Wuxuu tifaftire ka noqdey shabakadda Sunnatimes ee afka Ingiriiska ku hadasha, oo fadhigeedu yahay Muqdisho.
Sawirada ayuu ka iibsanjiray si madax banaan wakaaladaha wararka ee shisheeye.
Wuxuu ka iibsanayay wararka dhacdooyinka Soomaaliya warfaafinta Mareykanka AP tan iyo 2011.
Xiriirkiisa Nabadda iyo Nolosha:
2016 Wuxuu ku biiray ololaha Farmaajo, markii uu bilaabay inuu si dhow ula shaqeeyo taliyaha sirdoonka ee hada Fahad Yaasiin, oo xiligaas hogaaminayay ololaha Farmaajo.
Waxaa loo xilsaaray inuu gacan ka geysto diyaarinta warbaahinta af-ingiriisiga ku hadla, oo qaarkood lagu daabacay hay’adii uu ka shaqeyn jiray, qaarna si dadban ay u daabaceen warbaahinta kale ee caalamiga ah.
Sannadkii 2017-kii wuxuu noqday sarkaal aan joogtadda aheyn oo ka tirsan madaxtooyada, isagoo sii wadaya isla shaqadii ololaha doorashada, wuxuuna si dhow ula shaqeynayay agaasimihii warfaafinta ee xilligaas Villa Soomaaliya, Cabdinuur Maxamed Axmed.
Sanadkii 2018, iyadoo xaruntiisu tahay Uganda, waxaa gebi ahaanba lagu wareejiyay baraha bulshada ee ku hadla luuqadda Ingiriiska oo taageera madaxweyne Farmaajo isla markaana dhaliila mucaaradka. Guuleed ayaa masuul ka ahaa diyaarinta qoraallada Twitterka iyo u qeybinta shaqaalaha baraha bulshada ee madaxtooyada ka shaqeeya.
Guuleed ayaa ka soo jeeda gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, in kasta oo uusan xiriir la lahayn qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka.
Dabayaaqadii bishii Sebtember, soo jeedin ka timid agaasime ku xigeenka madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed, oo uu ka aqbalay taliyaha sirdoonka Fahad Yaasiin, ayaa go’aansaday inuu ka mid noqdo guddiga.
Saxafadda ayaa ogaatay inta baaritaanka uu socday in C / naasir uu sugayay xil dowladeed seddex sano iyo bar, laakiin wuu aqbalay soo jeedinta.
La soco “Qeybta Dambe”
Unpleasant Aspect Results of Consuming French Fries,